डा. केसी तिमी राक्षसी राजका एक गान्धी नै हौ, तिमी प्रति हामीलाई पनि असीम श्रध्दा र सम्मान छ । – Complete Nepali News Portal
डा. केसी तिमी राक्षसी राजका एक गान्धी नै हौ, तिमी प्रति हामीलाई पनि असीम श्रध्दा र सम्मान छ ।
२४ दिन लामो आमरण अनसन एकतर्फी रुपमा अन्त्य गरेका छन डा. केसीले !
डा. गोबिन्द केसीले नत आफ्ना लागि जिबनमा कहिलै केही मागेका छन न त कुनै ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि अनसन बसेका छन । अस्पताल भित्रै बस्ने, बिरामीको उपचार गर्ने, न विवाह न पारीबारिक मोह, न त कुनै लोभ लालच, एक जोडी आङमा लगाएका थोत्रा लुगा र समय हेर्न सामान्य घडी, न मोबाइल फोन न त कुनै मोह ! सम्पूर्ण जिबन बिरामीहरुमा सुम्पेका यिनी नेपालका महात्मा गान्धी नै हुन जो आफ्नै तलब बाट गास काटेर गरीब गुरुवाहरुलाई गाउँ गाउँ पुगेर उपचार गर्ने, सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा सहुलियत सुलभ बनाउन जिबनको पर्वाह नगरी सत्याग्रह गर्दै आएका छन ।
दीन दुखी गरीबहरुका साक्षात भगवान डा केसीका माग उपर काङ्रेसको होस वा तत्कालिन एमाले वा माओवादीको वा संयुक्त सरकार वा अहिलेको दुई तिहाइको अति दम्भ बोकेको सरकार, कुनै पनि सरकारले सही ढङ्गले सम्बोधन गरेका छैनन र होइनन पनि । राक्षसी राज चलिरहेको, शतिले श्राप गरेको मुलुक नेपालमा अपराधी शाशकहरुले उनलाई गोर्खाका नन्द लाल अधिकारीलाई जस्तै न्याय माग्दा माग्दै मरोस र आनन्द हुन्छ भन्ने मनसायमा थिए तर नागरिक समाज, सहयोगी चिकित्सकहरु, पूर्व प्रधान न्यायाधिश शुशीला कार्की, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, विद्वान केदार भक्त माथेमा, पूर्व प्रधान न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ, पत्रकार, मानबाधिकारबादीहरुको पहलमा २४ दिन लामो आमरण अनसन एकतर्फी रुपमा अन्त्य गरेका छन डा. केसीले ।
अपराधीहरु मालिक बनेर सत्ता चलाइरहेका बेलामा पनि तिनै अपराधीका मतियारहरुको भनाइ अनुसार डा केसी का ९५ प्रतिशत माग पुरा भएका छन अब ५ प्रतिशत माग पुरा हुन बाँकी छन । यो नै राक्षसी राजको ठुलो हार हो । नहुनुभन्दा ९५ प्रतिशत नै सही माग पुरा गर्नै पर्ने परिस्थिती सिर्जना गर्ने डा. केसी र उनका सहयोगीहरुलाई हार्दिक नमन गर्नै पर्छ नेपाली जनताले ।
२४ दिन लामो आमरण अनसन एकतर्फी रुपमा अन्त्य गर्दै डा. केसीले बाँकी माग पुरा गर्न फरक ढङ्गले लड्ने जुन निर्णय गरे त्यसले राक्षसी राज लाई अर्को थप्पड मिलेको छ ।
अब मार्सीबादीहरुले भन्ने छन डा. केसीले हारे, दुई तिहाइको सरकारले ठीक गर्‍यो जित्यो, डा. केसी दलाल हुन, माफिया हुन आदी आदी । तर ति मार्सीबादीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने ९५ प्रतिशत माग पुरा हुनु हार होइन ठुलो जित हो डा केसी र निर्दा जनताको । फेरी पनि सलाम छ डा. केसीलाई, डा. केसी तिमी राक्षसी राजका एक गान्धी नै हौ ! तिमी प्रति हामी लाई पनि असीम श्रध्दा र सम्मान छ ।
फोटो अफ द इयर : मार्सी चामलको भातमा कति दम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा दुनियाँले थाहा पाएकै होलान अब !
आफ्नो देश र सन्ततीको भविष्य माथि घात गरि जन्मजात छिरेको पार्टीकै झन्डा बोकेर मर्नेछन यि मान्छेहरु !
हुन त मानिसहरू राजनिती भनेको समाजसेवा हो भन्ने गर्छन । निस्वार्थ भावनाले घर परिवार छाडेर देश र जनताको सेवा गर्नु ।
यतार्थ मा न त्यस्तो रह्यो न त देखियो । हिज पढ्न नसकि गाऊका कुखुरा चोर्ने आज शासंद र मन्त्री भएको फुट्ने आखाले देखेकै छ ।
हुन त हरेक पार्टी जनताको सेवा कै लागि भनेर गठन गरिएका हुन्छन । जब निति, नियम र संघर्षको कुराहरू राम्रा मानिसहरूको छनोट हुन्छ । जब नेतृत्व वा पद बाडफाडको कुराहरू हुन्छन तब लुच्चा, लफंगा, चोर, डाकाहरूको छनोट हुन्छ ।
त्यसैले होला हरेक पार्टीहरू भित्र दुई थरिका मानिसहरू हुन्छन। एक पार्टी र जनता प्रति सधै इमान्दार, नैतिक, स्वच्छ्य छवि भएका कार्यकर्ताहरू र अर्का नैतिकता नभएका जालि, फटाहा, हुल्याहा उजन्ड प्रकृतीका कार्यकर्ताहरू ।
पार्टी भित्र पकड सधै यीनै दोस्रो वर्गका कार्यकर्ताको हुन्छ । नेताहरूले यीनै लाई मन पराउछन र टिकट दिन्छन । विवेकसिल कार्यकर्ताहरू अन्धभक्त हुन सक्दैनन भन्ने कुरा नेतृत्वलाई राम्री थाहा हुन्छ । त्यसैले यीनै हनुमानहरू प्रवृतीका मानिसहरू नै नेतृत्वमा पुग्छन र ठुलो रकम लगानि गरि मन्त्री समेत बन्छन ।
आज हरेक पार्टीमा केन्द्र देखि जिल्ला र गाऊ सम्म यीनै चरित्रहिन खराव प्रबृती र नैतिकहिन मानिसहरूको राज र पकड छ । असल र राम्रा मानिसहरू आफै पाखा लागि सके। हरेक पार्टि भित्र भ्रष्टाचारी गुट, माफिया गुट, दलाली गुट, ठेक्केदारी गुट
…खोलि सकेका छन ।
हिज साम्यबाद र लेनिनबाद माओबाद भनेर तेत्रो नरशंहार गर्ने, प्राइवेट – कलेज, बोर्डिड, नर्सिड होम, अस्पताल सबै तोडफोड गरि बन्द गरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारीकरण गर्नु पर्छ भन्ने पार्टी आज माफियाकरण गर्दैछ । जमिन्दारका जमिन हडपेर राज गर्ने पार्टी आज जग्गा दलाली गर्दैछ । स्वदेशी रोजगारीको कुरा गर्ने पार्टी बैदेसिक रोजगारीको दलाली भै स्वदेश बिदेशमा भर्ति केन्द्रहरू थप्दैछ । हिज सय रूपैया भ्रष्टाचार गर्दा मानिस टुक्राउने पार्टी आज अरबैको भ्रष्टाचार आफै गर्दैछ ।
कसरी मुख देखाउछन र कुरा मिलाएर बोल्न सक्छन होला तिनै कार्यकर्ता माझ ? कसरी ताली पिट्छन होलान तिनै दुई जिब्रे नैतिकहिन तिनै नेताको समर्थनमा कार्यकर्ताहरू अन्धभक्त हनुमान बनि ?
यदि साच्चै देश बनाउने हो भने राजाको प्रतिष्ठापन गर्ने मुर्ति राष्ट्रपति हटाएर प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्बाचन बाट चुन्नु पर्छ । तर यसो गर्न हाम्रा केन्द्रिय नेता र पार्टीले मरे पनि गर्ने छैनन । किनकी तेहि पदको लागि र्याल काढेर जो बसेका छन ।
जति नै घुक्रो फुट्ने गरि कराए पनि अझै २० बर्ष आलोपालो यीनै कांग्रेस र कम्युनिष्ट हरू नै शासन सत्ता चलाउने पक्का छ । चुनाब सकिए पछि आफै लाई निकै बुद्दिजिबी, नैतिक र विवेकसिल ठाने पनि चुनाबको वेलामा कालो डागे कुकुर उठाए पनि हूइप जारि गरे पछि पुच्चर टाडमुनी छिराएर कूं कू गर्दै आफै यिनै पार्टी लाई नै भोट हाल्छन ।
आफ्नो देश र सन्ततीको भविष्य माथि घात गरि जन्मजात छिरेको पार्टी कै झन्डा बोकेर मर्नेछन ।
“रोप्ने औरेलु खान खोज्ने कांक्रो !”